Kadib Guuldaradii Manchester United Waa Sidee Kala Sareynta Horyaalka Ingiriiska.
HomeHoryaalka IngiriiskaKadib guuldaradii Manchester united waa sidee kala sareynta horyaalka ingiriiska.
January 28, 2021 Horyaalka Ingiriiska, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Kadib kulamadii 20 aad ee horyaalka premier league waxaa isbedel ku yimid dhanka kala sareeynta kadib markii kooxo badan guulo gaareen halka kuwa kale guul darooyin ay la kulmeen.
Manchester united ayaa hogaanka sii dheereysan kartay hadii ay guul ka gaari lahaayeen dhigooda Shefield united iyadoona looga adkaaday 2-1 ciyaar ku dhaamatay halka Man city 5-0 kaga badiyeen kooxda West Brom.
Xilligaan waxaa hogaanka hal dhibic ku heysa kooxda Man city iyadoona kulan baaqi ah gacanta ku heysata waxaa ay leedahay 41 dhibcood Halka kaalinta labaad ay fadhiso Kooxda ay isku magaalada yihiin ee Man utd waxaana ay leedahay 40 dhibcood.
Kaalinta sedexaad waxaa ku jirta kooxda lagu magacaabo leicester city waxaana ay leedahay 39 dhibic sidoo kale waxaa kusii xigta kooxda west ham waxaa kooxdaan ay shaqeysatay 35 dhibic.
Kooxda difaacaneyso koobka premier league ayaa ku jirta kaalinta shanaad waxaana ay leedahay 34 dhici waxaana ay kulan adag la ciyaari doontaa kooxda totonham oo ay ku booqan doonaan gurigooda kooxda Mourinho ayaa leh 33 dhibcood.